Indlela Yokucacisa Izikhumbuzi Ezizenzakalelayo ku-Google Calendar
Imeyili & Imibiko Amathiphu & Tricks
Amakhalenda esikoleni esidala akukhumbuza ngokwanele ukuqokwa, imisebenzi, kanye nezinsuku ezikhethekile-uma nje ukhumbule ukubheka igridi elibalwe ilenga odongeni noma uhlezi edeskini. Enye inzuzo enkulu ukuthi amakhalenda e-elekthronikhi e- Google njenge- Google Calendar anikezela ngaphezu kwamakhalenda amaphepha wendabuko yikhono lokukuxwayisa nomaphi lapho ukhona khona, noma ngabe kwenzekani, ukuthi into ethile idinga ukunakwa. Ungasetha ikhalenda enjalo ukuze ngisho nemisebenzi emincane nemicimbi iphakamise ukuxwayisa ukuze uhlale ithrekhi usuku lonke.
Kukhalenda ngalinye elibhalwe umbala ku- Google Calendar , ungacacisa izikhumbuzi eziyisihlanu ezizenzakalelayo. Lezi zixwayiso zisebenza ngokuzenzakalelayo kuzo zonke izenzakalo zesikhathi esizayo ukukukwazisa nganoma yini oyilungiselele yona.
Ukukhetha indlela yohlelo lwe-Calendar & # 39; s
Ukusetha indlela ezenzakalelayo kanye nesikhathi sokukhumbuza kunoma iyiphi i-Google Ikhalenda:
Landela isixhumanisi sezilungiselelo ku-Google Calendar.
Iya kumakhalenda ithebhu.
Chofoza Hlela izaziso kumkhalenda wekhalenda oyifunayo kukholomu yezaziso .
Ku- Isaziso sezaziso zomcimbi, chofoza u- Engeza Isaziso .
Ngesaziso ngasinye ongathanda ukusibekela, khetha ukuthi ufuna ukuthola umyalezo wesaziso noma i-imeyili, kanye nesikhathi.
Emgqeni Wezaziso Zomcimbi Wosuku Lonke , ungakhetha ukuthi ungathanda ukuxwayiswa kanjani ezenzakalweni ezinsukwini ezithile ngaphandle kwezikhathi ezithile.
Ukuze ususe isaziso esizenzakalelayo esikhona, chofoza Susa ukuze uthole isaziso esingadingeki.
Lezi zilungiselelo ezizenzakalelayo zithinta zonke izenzakalo ngaphakathi kwamakhalenda azo; Kodwa-ke, noma iziphi izikhumbuzi ozicacisa ngokuzenzakalelayo uma uhlela umcimbi othize uzodlula izilungiselelo zakho ezizenzakalelayo. Ngamanye amazwi, ungasetha isaziso esihlukile somcimbi othize uma uqala ukusetha ekhalendeni, futhi kuzobe ngaphezulu kwezilungiselelo zakho ezizenzakalelayo.
Ukubuyekezwa kwe-SaneBox Isevisi yokuHlola ne-Triage imeyili
Ungavimbela kanjani umthumeleli ku-Outlook Mail
Indlela Yokufaka I-Image Engaphakathi Ku-imeyili nge-Mozilla Thunderbird
Ungangenisa kanjani Oxhumana nabo be-Gmail ku-Mozilla Thunderbird
Ukusebenzisa i-Markdown e-imeyli ukuze uthumele imiyalezo ecacile
Ama-Sites E-Card Ethandekayo E-Thanksgiving angu-25 aphezulu kakhulu
Indlela Yokusetha I-Hotmail Yakho Isignesha ku-Outlook.com
Sebenzisa ngokuzenzekelayo isithombe kusiginesha se-Thunderbird
Amabhuku aphezulu ama-Forensic and Impident Response
Amageyimu we-Free Free Platformer we-PC
Isilinganiso se-Frame Frame yevidiyo nesilinganiso sokuvuselela isikrini
I-15 Best Birthday Memes ka-2018
I-Layers ye-OSI Model Illustrated
I-LEGO Marvel Avengers Feels Ejwayele
I-Mac OS X ayiyona i-Linux Distribution, Kodwa ...
Ungakuvala kanjani i-4G ku-iPad
I-SONY BDP-S790 3D Network Player Blu-ray Disc - Isithombe se-Photo
Indlela Yokufaka Indawo Yomhlaba Kwangaphakathi Idokhumenti e-Portrait eZwini
Ingabe i-Cable yakho Inkampani inikeza iTiVo?
Indlela Yokuthenga Isistimu ye-Stereo ekulungele Izidingo Zakho
Buyekeza: Ishaja se-Snow Lizard Power Tek SLPower 7
Indlela Yokwakha I-ID ye-Apple yengane ezinyathelweni ezingu-4
Yini i-Google Project Fi?
Setha ukuvota ku-Microsoft Umshicileli
I-Guitar Hero: Ama-Warriors we-Rock Setlist
Indlela yokusebenzisa i-Wikipedia ye-Web Searches
Ukuqala kokuzivocavoca kwe-3D Modelers
Ukuxazulula izinkampani ze-Sony
Kuyini Okumisiwe kwama-laptops
Indlela yokusebenzisa i-Instagram ku-PC noma ku-Mac